Aniga ( oo ah gabar, 16 jir ah) waxaan ku socdaa kursiga curyaamiinta.Weligay ma yeelan wiil saaxiib ila ah.Saaxiibaday kuma socdaan kuraasta curyaamiinta.Dhammaan saaxiibaday waxay soo yeesheen wiilal saaxiibo la ah.Tani miyay sabab u tahay in wiilashu aysan u maleyn in aan qurxoonahay?
Du bist hier: Startseite / Aniga ( oo ah gabar, 16 jir ah) waxaan ku socdaa kursiga curyaamiinta.Weligay...
19. Juni 2018 /in /von editorialteam
Waxay u muuqataa in kursigaaga curyaamiinta uu kaa dhigayo qof aan kalsooni isku qabin.
Waxaa laga yaabaa in aad dareento “ka duwanaan” marka la eego saaxiibadaada.
Taasi waxay dad badan ka dhigtaa in ay dareemaan kalsooni la’aan:
Marka ay dareemaan “ka duwanaan”.
Waxaa sidoo kale laga yaabaa in aad dadka ka maqashey fikrado doqonnimo ah.
Sidoo kale, taasi waxay kaa dhigi kartaa qof aan kalsooni isku qabin.
Balse qof kasta waa qof gaar ah.
Mid ka mid ah waxyaabaha kaa dhigi kara in aad tahay qof gaar ah waa ay sahlan tahay in la arko.
Waxaa laga yaabaa dadku in ay kaala hadlaan.
Waxaa laga yaabaa in ay taasi tahay sababta aad uga fakarayso.
“Ahaanshaha qof qurux badan” waxay qof kasta u leedahay macno kala duwan.
Waxa qurxoon waa waxa kaa dhiga kara in aad tahay qof kali ka ah noociisa oo kale.
Waxaa jira keliya hal qof oo adiga ah!
Gabdho iyo wiilal badan xiriir ma yeeshaan waqti dheer.
Balse:Gabdho iyo wiilal badan oo ku socda kursiga curyaamiinta ayaa xiriir leh.
Adiguna maalin unbaad yeelan doontaa.
Waa iska caadi haddii aadan hore u yeelan wiil saaxiib kula ah.
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2018-06-19 14:38:582018-06-19 14:38:58Aniga ( oo ah gabar, 16 jir ah) waxaan ku socdaa kursiga curyaamiinta.Weligay ma yeelan wiil saaxiib ila ah.Saaxiibaday kuma socdaan kuraasta curyaamiinta.Dhammaan saaxiibaday waxay soo yeesheen wiilal saaxiibo la ah.Tani miyay sabab u tahay in wiilashu aysan u maleyn in aan qurxoonahay?
Übungsworkshops zu sexuellen Aktivitäten von Kindern in der Kita
24.06.2021 - 22.10.2021